Taariikh Nololeedka Mega Power Star Ram Charan Teja Oo Dhameestiran (+Sawiro) | Filimside.net
Home » Nolosha Jilaayaasha » Taariikh Nololeedka Mega Power Star Ram Charan Teja Oo Dhameestiran (+Sawiro)
Taariikhda: March 27, 2018
Madaama maanta ay tahay dhalashada Mega Power Star Ram Charan Teja waxaan idiin heynaa wax walbo oo aad uga baahan tahay inaad xidigan ka ogaatid.
Ram Charan Teja maanta ayuu 33-sano jirsaday waxaana lagu tilmaamaa inuu mustaqbalka noqon doono Super Star-kii ugu saameynta badnaa ee ebid Koonfur Hindiya soo maray gaar ahaan reer Telugu shirkadooda lagu magacaabo Tollywood.
Hadaba maanta aan isla ogaano safarka nolosha Super Star-kan iyo marxaladaha ay soo martay oo ah mid aad u xiiso badan.
Ram Charan Teja Iyo Qoyska Uu Kasoo Jeedo:
Ram Charan Teja wuxuu ku dhashay magaalada Chennai 27 Maarso sanadii 1985 waxaana aabo u ah Mega Star-ka Teugu ugu awooda badan taariikh ahaan Chirenjeevi halka hooyadiis lagu magacaabo Surekha.
Ram Chran xiligan wuxuu ku nool yahay magaalada Hyderabad asigoo la nool qoyskiisa baaxada leh sidoo kalena Koonfur Hindiya caanka ka ah.
Ram Charan qaraabadiisa dhamaan Tollywood ayay ka tirsan yihiin waxaa adeer u ah Super Star-da caanka ah Pawan Kalyan, Nagendra Babu iyo Allu Aravind, halka ay ilmo adeero yihiin wiilasha shidan ee Tollywood laga jecel yahay Allu Arjun iyo Allu Sirish.
Sidoo kale Ram Charan waxaa la dhasheen labo gabdhood oo lagu magacaabo Sushmita iyo Sreeja.
Ram Charan Iyo Markii Uu Fanka Kusoo Biiray Telugu (Tollywood):
Ram Charan sanadii 2007 asigoo 22-jir ah ayuu Tollywood kusoo biiray wuxuuna la yimid filimkii Chirutha ee uu sameeyay Director Puri Jagannadh.
Ram Chran waxaa saarnaa culees weyn madaama aabihiis uu yahay Mega Star Hindiya dhan laga jecel yahay, laakiin Ram sharafka aabihiis dhulka lama galin madaama filimkiisii kowaad uu Hit weyn noqday sido weliba mudo 50-maalmood oo xariir ah ayuu tiyaatarada Koonfur Hindiya saarnaa.
Ram si dhaqsi ah ayuu ku noqday xidig aad loo jecel yahay dhalinta Hindiya oo dhana wuu soo jiitay madaama si wacan loo amaanay qaab jilinkiisii kowaad.
Ram Charan filimkiisii xigay wuxuu ahaa Magadheera kaasi oo sanadii 2009 soo baxay waxaana Director ka ahaa SS Rajamouli.
Magadheera wuxuu noqday filim Classic ah oo lagu daawaday luqadaha Tamil, Malayam iyo Hindi wuxuuna noqday Industry Hit ama All Time Blockbuster oo ah darajada ugu sareyso ee filim gaaro!
Filimka Magadheera wuxuu ka caawiyay Ram Charan inuu noqdo Super Star-ka ugu saameynta balaaran reer Telugu xiligaas madaama filimkan lagu sameeyay 35 Crore uu soo xareeyay 150 Crore isku darka gudaha Hindiya iyo suuqyada caalamka.
Magadheera oo tiyaatarada saarnaa mudo 100-maalmood ah ayaa ka caawiyay in Ram Charan uu markiisii ugu horeesay ku guuleesto atooraha ugu wanaagsan Koonfur Hindiya abaal marinta ay shirkada Filmfare Awards bixiso.
Ram Charan oo cirka maraayo ayaa markii ugu horeesay dhadhamiyay guuldarada waxa ay tahay madaama filimkiisii Orange ee uu sanadii 2010 la yimid uu noqday mid siweyn u guul dareestay balse Ram bandhigiisa siweyn ayaa loo amaanay laakiin jab lama filaan ah ayaa Super Star-kan gaaray.
Ram Charan ayaa sanadii 2012 soo laba kacleeyay wuxuuna la yimid filimkii wacnaa Rachcha filimkan guul wacan ayuu gaaray madaama uu soo xareeyay 45 Crore ayadoo lagu qarash gareeyay 32 Crore sido kalena Blockbuster weyn noqday.
Ram ayaa amaan balaaran ku helay doorkiisii Rachcha weliba waxaa lagu tilmaamay inuu la yimid astaantii iyo qaab jilinkii lagu yaqiinay aabihiis Mega Star Chiranjeevi.
Super Star Ram Charan ayaa sanadii 2013 la yimid filimkii uu laba door ku matalay Naayak waxaana la jileen labada atirisho Kajal Aggarwal iyo Amala Paul.
Filimkan sidoo kale Af Hindiga lagu daawaday waxaa loogu yeeraa magac ahaan Double Attack wuxuuna gaaray guul wacan darajo ahaan (Blockbuster) ayuu noqday madaama kooxaha cajaladaha qeybiyaan ay ka heleen saami gaarayo 46.50 Crore.
Ram Charan ayaa sidoo kale sanadii 2013 la kulmay dib u dhacii ugu weynaa (Major Setback) hormarkiisa dhanka fanka, madaama uu xidigan kusoo biiray Bollywood-ka wuxuuna la yimid filimkii Zanjeer.
Zanjeer waa filim dib loo sameeyay waxaana sanadii 1973 jilay Amitabh Bachchan oo amaan badan ku helay ganacsi ahaan iyo sheeko ahaan.
Laakiin Zanjeer oo ay Priyanka Chopra iyo Sanjay Dutt la jileen Ram Charan wuxuu noqday filim bur buray sidoo kalena ka mid noqday aflaanta taariikh ahaan qasaarada ugu xoogan lagala kulmay.
Weliba shirkada Reliance Entertainment ayaa ku iibsatay filimka Zanjeer xuquuqdiisa qeybinta cajaladaha 105 Crore ($16M) ayadoo aaminsaneed in filimkan Blockbuster weyn noqon doono laakiin cimri ahaantiisa isku dar ahaan wuxuu soo xareeyay 45 Crore ($6.7M)!!!!
Ram Charan ayaa ku qaatay sameynta filimkan asigoo Hindi ah (Zanjeer) iyo asigoo Telugu ah (Thoofan) lacago gaarayo 15 Crore ($2.2M) waxayna noqotay lacagihii ugu badnaa ee atoore Bollywood-ka kusoo biirayo hal filim lagu siiyo!!
Laakiin hamigii laga lahaa Zanjeer iyo sidii uu noqday ma ahan wax lasoo koobi karo sheekadana waxay noqotay kaaf iyo kala dheeri madaama Zanjeer sheekadiisa ay daawadayaasha iska diideen!
Ram Charan oo aad u niyad jabay ayaa go’aan ku gaaray inuusan mardambe sameynin filim Bollywood ah wuxuuna dhamaan isaga baxay heshiisyadii uu la gaaray shirkadaha Bollywood-ka inuu filimo u sameeyo mustaqbalka.
Ram Charan ayaa ku laabtay Koonfur Hindiya wuxuuna sanadii 2014 la yimid filimkii Telugu gil gilay Yevadu ee uu ku matalay labada waji waxaana la jileen Shruti Haasan, iyo Amy Jackson halka ay muuqaal marti ah ku lahaayeen Allu Arjun iyo Kajal Aggarwal.
Ram Charan ayaa ku helay amaan aan lasoo koobi karin qaab jilinkiisii Yevadu sidoo kalena filimkiisa guul weyn ayuu gaaray asigoo soo xareeyay lacago 60 Crore sare u dhaafayo sidoo kalena saami 40 Crore gaarayo ayay kooxaha cajaladaha qeybiyaan ka heleen.
Ram Charan sanadii 2014 dhamaadkeedii wuxuu la yimid filimkii nolosha arimaha qoyska ka hadlaayay Govindudu Andarivadele.
Filimkan guul dhex dhexaad ah ayuu gaaray madaama uu soo xareeyay 41 Crore waxaana lagu qarash gareeyay 30 Crore sidoo kalena Ram Charan wuxuu ku muujiyay in xidigan inuu door walbo sameyn karo.
Super Star-kan ayaa sanadkii 2015 la yimid filimkii la wada sugaayay Bruce Lee oo ay la sameesay atirishada lagu magacaabo Rakul Preet Singh.
Laakiin Bruce Lee wuxuu noqday filim guul dareestay madaama lacago qaali ah oo 55 Crore ka badan kooxaha cajaladaha qeybiyaan looga iibiyay.
Filimkan ganacsi fiican kama sameynin Koonfur Hindiya madaama sheeko ahaan dadka ka helin sidoo kalena suuqyada caalamka kagama gadmin.
Ram Charan ayaa ka balan qaaday kooxaha cajaladaha qeybiso inuu magdhow siin doono sidoo kalena filimadiisa xiga Super Star-kan uu kooxaha cajaladaha qeybiyaan iyo kuwa tiyaatarada iska leh qiimo jaban ku siin doon si ay kaga soo kabtaan qasaarihii filimka Bruce Lee kasoo gaaray.
Sanadkii 2016 waxuu la yimid filmkiisa Dhruva ee ay la waday Rakul Preet Singh waxuuna filmkaan gaaray guul dhex dhexaad ah asigoo noqday Semi Hit/Above Average sido kalena 89.6 Crore ayu keenay iskudarka gudaha india iyo daafaha caalamka waxayna kooxaha cajaladaha qeybiyaan ka heleen saami ah 55.5 Crore.
Ram Charan waxaa jimcadan nagu soo aadan taariikhdana ku beegantahay tiyaatarada loo saari doona filmkiisa Rangasthalam kaaso ay la wado Samantha Akkineni waana mashruuc lagu kalsoonyahay inuu guul taariikhi ah gaaro.
Ram Charan Teja Iyo Noloshiisa Gaarka Ah:
June 14, 2012, Super Star Ram Charan Teja wuxuu qalbiga ka jabiyay malaayiin gabdho hami kaga jiray inay mar un la saaxiibaan ama calfadaan madaama uu si rasmi ah ula aqal galay gabadha lagu magacaabo Upasana Kamineni.
Upasana Kamineni waxaa aaboe u ah gudoomiye ku xigeenka hay’ada Apollo Charity sidoo kalena ah tifaftiraha wargeska B Positive magazine ee xarunta ku leh magaalada Hyderabad.
Ram Charan sidoo kale waa shaqsi ganacsiga Koonfur Hindiya saameyn ku leh wuxuuna shirkadaha diyaaradaha ee xarunteeda magaalada Hyderabad tahay TrueJet taasi oo shaqo gashay sanadii 2015.
Sidoo kale xidigan ganacsiyo kala duwan oo magaalada Hyderabad caan ka ah ayuu maal gashi ku sameeyaa wuxuuan ka mid yahay jilaayaasha gudaha Hindiya ugu hantida badan.
Waxaa Aqrisay 1,867